FRIDAY NIGHT ၏ … ဒိုင်ယာရီ… – Grab Love Story
FRIDAY NIGHT ၏ … ဒိုင်ယာရီ…
အဲဒီနေ့က သောကြာနေ့လေ။ နောက်နေ့ အလုပ်ကလဲပိတ်တော့ လင်မယားနှစ်ယောက် ညဘက် ကလပ်ကို ချီတက်တာပေါ့။ အိမ်မှာကလဲ ဧည့်သည်တွေရောက်နေတော့ ညကျလွတ်လွတ်လပ်လပ်နေလို့ရအောင် ဟော်တယ်မှာပဲညအိပ်ဖို့စီစဉ်ထားပြီးသား။ ကလပ်အပြန် ညကျရင် ဟော်တယ်မှာ ပွဲကြမ်းမယ်ပေါ့ဗျာ။ ကလပ်မှာဘော်ဒါတစ်ယောက် တွေ့တယ်ဗျ။ ဒီကောင်ကလူပျိုပဲ။ ဒါပေမယ့် မိန်းမဝါသနာ အရမ်းကြီးတဲ့ကောင်။ ဒီကောင့်ပုံစံက ကစားသမားပုံစံ။ တောင့်တောင့်ဖြောင့်ဖြောင့်ပဲဗျ။ ဒီကောင်က ကျနော့်မိန်းမကိုတွေ့တိုင်း ဖင်တွေရင်တွေကို ကြည့်နေကြဗျ။
ဒီနေ့မိန်းမဒီဇိုင်းကိုလဲမြင်ရော ဒီကောင့်မျက်လုံးတွေဆိုတာ ကျွတ်ထွက်လာမလားမှတ်ရတယ် ငမ်းတာငမ်းတာ။ ကျနော်လဲ ဒီနေ့သောက်ထားတဲ့အရှိန်ကြောင့်လားမသိဘူး ဒီကောင်ကြည့်နေတာကို စိတ်မဆိုးတဲ့အပြင် ဒီကောင့်ကို ကျနော့်မိန်းမရဲ့ နို့တွေ ဖင်တွေကို ပြချင်လာတယ်။ အဲဒါနဲ့ဒီကောင့်ရှေ့မှာတင် မိန်းမကို ဖက်ပြီး ကစ်ဆင်ကောက်ဆွဲရင်း လက်တစ်ဖက်က မိန်းမ၀တ်ထားတဲ့ စကတ်တိုတိုလေးအောက်ကနေ နှိုက်ပြလိုက်တယ်။မိန်းမဝတ်ထားတဲ့စကတ်က ပေါင်ရင်းနားထိရောက်တဲ့ စကတ်တိုတိုလေးလေ။ အောက်ကနေ ပငိ့နှိုက်လိုက်တာနဲ့ ဝတ်ထားတဲ့ ဂျီစတထရင်း အောက်က အဖုတ်ကိုတန်းနေတာပဲ။ အဲလိုလုပ်ရင်း ဒီကောင့်လှမ်းရှိုးလိုက်တော့ ဒီကောင့်ရဲ့မျက်လုံးတွေက ပိုပြူးလာပြီး စတွေးတွေမြိုချနေတာ တွေ့တယ်။ ဒီကောင့်လက်တွေက လက်သီးကို ဆုပ်လိုက် ဖွလိုက်နဲ့ ဂဏာမငြိမ်ဖြစ်နေတာ။ ကျနော်လဲ ဘာကြောင့်ရယ်မသိပဲ ဒီကောင်ရဲ့ ပေါင်ခွကြားကို လှမ်းကြည့်မိတယ်။ လားလား.. ဒီကောင်က ကျနော်တို့လင်မယားကိုကြည့်ပြီး လီးတောင်နေတာဗျ။ ကျနော့်မိန်းမကို ပစ်မှားပြီးတောင်နေတာ ဘောင်းဘီခွကြားကြီးကိုဖောင်းလို့။ ကျနော်ကမိန်းမကို ကစ်ဆင်ဆွဲနေရာကနေ နားရွက်လေးတွေကိုလျှာနဲ့အသာတို့သလိုလုပ်ရင်း မိန်းမကိုကြည့်လိုက်တော့ မိန်းမရဲ့မျက်လုံးတွေက မူပါပါနဲ့ ဒီကောင့်မျက်နှာကိုကြည့်လိုက်၊ ဒီကောင့်ရဲ့ ဒုတ်နေရာကိုလှမ်းကြည့်လိုက်နဲ့ဗျ။
မိန်းမရဲ့လက်တစ်ဖက်က ကျနော့်ကိုဖတ်ထားတာ။ မဖတ်ထားတဲ့ နောက်လက်တစ်ဖက်က လှုပ်နေပါတယ်ဆိုပြီး လက်နေရာကိုလိုက်ကြည့်လိုက်တော့ ဟိုကောင်မြင်နေရတဲ့ ဘက်ခြမ်းက ပေါင်ကို ပွတ်ပြနေတာ။ သူတို့နှစ်ယောက်မျက်လုံးချင်းဆုံနေတာတွေ မိန်းမကဒီကောင့်ကိုပွတ်ပြနေတာတွေကို ကြည့်ရင်း ကျနော်လဲ လီးတောင်လာတယ်။ တောင်တာတောင်မှ တစ်ခါမှမကြုံဖူးလောက်အောင် တောင်လာတာ။ သူတို့နှစ်ယောက် မျက်လုံးချင်းဆုံနေတာတွေ၊ မိန်းမကဒီကောင့်ကိုပွတ်ပြနေတာတွေကို ပိုဖြစ်လာအောင် လုပ်ချင်စိတ်တွေ ပေါ်လာတယ်။ ကလပ်ကအသံတွေ ရှုပ်ယှက်ခတ်နေတဲ့ လူတွေတစ်ယောက်မှ မရှိတော့ဘဲ ကျနော်တို့ သုံးယောက်ထဲရှိသလို ခံစားနေရတယ်။
အဲဒါနဲ့ကျနော်လဲ ပေါင်ကိုပွတ်နေတဲ့ မိန်းမရဲ့လက်ကိုယူပြီး စကတ်အောက်ကနေ သူ့အဖုတ်ကိုသူ ပွတ်ခိုင်းလိုက်တယ်။ ဂျီစထရင်းလေးကို အသာဖယ်ပြီး လက်တစ်ချောင်း ထည့်ကြည့်လိုက်တော့ အရေတွေထွက်နေတာမှ ရွှဲနေတာပဲ။ ထည့်လိုက်တဲ့ ကျနော့်လက်ကို ညှစ်ညှစ်ပေးနေတာ။ အဲဒါမျိုးညှစ်ပေးတာမျိုးက ချစ်ချစ် အရမ်း feel တက်နေတဲ့ အချိန်မျိုးမှဖြစ်တာလေ။ ( ကျနော်မိန်းမကို ကျနော်က ချစ်ချစ် လို့ခေါ်တာ….)အဲဒါနဲ့ပဲ စောက်ဖုတ်ထဲကို လက်နောက်တစ်ချောင်းပါထပ်ထည့်ပြီး လက်နှစ်ချောင်းနဲ့ အသွင်းအထုတ် လုပ်ပေး နေလိုက်တယ်။ လူတွေကြားထဲ ဘော်ဒါရဲ့ရှေ့မှာ လက်နဲ့လိုးပေးနေတာမျိုးပေါ့။ေ စာက်ဖုတ်ထဲနှိုက်ထားတဲ့ လက်နှစ်ချောင်းကို ချစ်ချစ်ရဲ့ပါးစပ်ထဲ ထည့်လိုက်တော့ ချစ်ချစ်က ကျနော့်လက်တွေကို လီးစုပ်သလို စုပ်ပေးတယ်။ ဘော်ဒါကိုကြည့်လိုက်တော့ နံရံကိုမှီပြီး ဘောင်းဘီပေါ်ကနေ လီးနေရာကိုပွတ်ပြနေတာ။ မျက်လုံးတွေကတော့ ချစ်ချစ်ရဲ့မျက်နှာနဲ့ ချစ်ချစ်စကတ်အောက် စောက်ဖုတ်နေရာကို သေသေချာချာ ကြည့်နေတယ်။
ချစ်ချစ်ကိုကြည့်တော့လဲ ဒီလိုပဲ။ ဒီကောင်ရဲ့ မျက်နှာတလှည့် သူ့လီးနေရာကိုတလှည့်သေချာကြည့်နေတာ။ ချစ်ချစ်ရဲ့စကတ်ကလဲ တော်တော်လန်နေပြီး ဘော်ဒါရဲ့နေရာကကြည့်ရင် ၀တ်ထားတဲ့ ဂျီစထရင်းတောင် မြင်နေရလောက်တယ်။ ကျနော်လဲ ကျနော့်ကိုဖက်ထားတဲ့ ချစ်ချစ်ရဲ့ လက်ကိုယူပြီး ကျနော့်လီးကို ဘောင်းဘီပေါ်ကနေ ပွတ်ခိုင်းလိုက်တယ်။ ကျနော်တို့ရောက်နေတဲ့နေရာက ချောင်ကျပြီး နံရံနဲ့ကပ်နေတဲ့နေရာလေ။ ခဏနေတော့ ချစ်ချစ်ရဲ့လက်ကို ဆွဲပြီးကတဲ့နေရာနားရောက်အောင် ဆွဲခေါ်လာတော့ ချစ်ချစ်ကိုကြည့်ရတာ ဆွဲခေါ်လာလို့သာလိုက်လာရတယ် စောစောကနေရာမှာပဲ ဘော်ဒါကို ပွတ်ပြချင်နေတုံးလို့ထင်တာပဲ။
ကတဲ့နေရာ အစွန်နားမှာ ချစ်ချစ်ကို မျက်နှာချင်းဆိုင်ဖက်ပြီးကနေတော့ ဘော်ဒါလဲ လိုက်လာပြီး ချစ်ချစ်နောက်ကနေ လာကတယ်။ ပုံစံက မိန်းကလေး တစ်ယောက်ကို ရှေ့တစ်ယောက် နောက်တစ်ယောက်ညှပ်ထားသလိုမျိုး။ ဘော်ဒါက ချစ်ချစ်ရဲ့ နောက်ကနေ ချစ်ချစ်ရဲ့ဖင်တွေကို မထိတထိနဲ့လာလာပွတ်နေတာကို ကျနော်မြင်နေရတယ်။ အဲလိုကျနော့်မိန်းမဖင်တွေကို လာပွတ်ရင်းနဲ့ ဒီကောင်က ကျနော့်ကို အကဲခတ်နေသေးတာ။ ကျနော်က မမြင်ချင်ဆောင်နေတော့ ချစ်ချစ်ဖင်တွေကို သေသေချာချာလာကိုင်တော့တာပဲ။ ကျနော်လဲ ချစ်ချစ်ကို လက်တစ်ဖက်ထဲနဲ့ပဲဖက်ပြီး လက်တစ်ဖက်က စကတ်အောက်ကနေ စောက်ဖုတ်ကိုပွတ်ပေးလိုက်တယ်။
ချစ်ချစ်ဘယ်လောက်တောင်ဖီးလာနေလဲမသိဘူး စောက်ဖုတ်ကထွက်နေတဲ့ အရေတွေက ၀တ်ထားတဲ့ဂျီစထရင်းကို ဖောက်ပြီး ကျနော့်လက်တွေကိုတောင် လာစိုနေပြီ။ ဘော်ဒါက ကျနော်မသိယောင်ဆောင်ပေးတာကို သိလို့လား မသိဘူး လက်တစ်ဖက်က ချစ်ချစ်ရဲ့ဖင်ကိုကိုင်ပြီးတော့ လက်တစ်ဖက်က ပေါင်တွေကို ပွတ်ပေးနေတာဗျ။ ကျနော်လဲအဲဒါကိုမြင်တော့ စိတ်တွေဘယ်လိုဖြစ်လာမှန်းမသိပဲေ ဘ်ာဒါကကျနော့်မိန်းမကိုကျနော့်မျက်စိရှေ့မှာတင် နှိုက်နေတာကို မြင်ချင်လာတယ်။
ချစ်ချစ်ရဲ့စောက်ဖုတ်ကို ပွတ်နေတဲ့ ကျနော့် လက်နဲ့ ချစ်ချစ်ရဲ့ဖင်ကိုပွတ်နေတဲ့ လက်ကိုဆွဲပြီး စကတ်ပေါ်ကနေ စောက်ဖုတ်ရှိတဲ့ နေရာမှာထားပေးလိုက်ပြီး ပေါင်ကိုပွတ်နေတဲ့လက်ကိုလဲ နို့ပေါ်ကိုတင်ပေးလိုက်တယ်။ ကျနော်ကတော့ ချစ်ချစ်ရဲ့ လက်နှစ်ဖက်ကိုပဲကိုင်ပြီး နောက်ကိုနဲနဲခွာလိုက်တာပေါ့။ ဘော်ဒါကသူ့လီးနဲ့ ချစ်ချစ်ဖင်တွေကို ပွတ်နေတာဖြစ်မယ် ချစ်ချစ်ကဖင်တွေကိုနောက်ကိုကော့ပြီး စကောဝိုင်းနေတာ တွေ့တယ်။ ဘော်ဒါရဲ့လက်တစ်ဖက် စကတ်ပေါ်ကနေ စောက်ဖုတ်ကိုပွတ်။ နောက်လက်တစ်ဖက် နို့နှစ်လုံးကို ပယ်ပယ်နယ်ကို ကိုင်နေတာ။ တစ်ချက်တစ်ချက်လဲ ပေါင်အတွင်းသားတွေကို ပွတ်နေတာတွေ့တယ်။
ချစ်ချစ်ရဲ့မျက်လုံးတွေက အရည်တွေလဲံ့ပြီး ကျနော့်ကို စူးစူးရဲရဲကို ကြည့်နေတာ။ ကျနော်လဲ အဲဒီမြင်ကွင်းကိုကြည့်ပြီး လီးကတောင်လွန်းလို့ နာတောင်နာလာတယ်။ ဒီတစ်ခါ ချစ်ချစ်နဲ့ဘော်ဒါ မျက်နှာချင်းဆိုင် ပွတ်နေတာကို မြင်ချင်လာတာနဲ့ ချစ်ချစ်ကို ကျနော့်ကို ပြန်ဆွဲခေါ်လိုက်တယ်။ ဘော်ဒါက ကပ်ပြီးပါလာလို့ ဒီကောင့်လက်တွေကို ဆွဲဖြုတ်လိုက်မှပဲ ကျန်ခဲ့တော့တယ်။ ကျနော့်ဆီကိုရောက်လာတဲ့ ချစ်ချစ်ကို ကစ်ဆင်ဆွဲပြီး ဖင်နှစ်လုံးကို ကြမ်းကြမ်းလေး ညှစ်ပေးလိုက်တယ်။ ပြီးတော့ ကိုယ်ကိုလှည့်ပေးလိုက်ပြီး ချစ်ချစ်ကိုဘော်ဒါဆီ ပြန်တွန်းပို့လိုက်တော့ ဟိုကောင်ကလဲ ဆီးဖက်တာပေါ့။ ချစ်ချစ်ကလဲ ပြန်ဖက်လိုက်တာတွေ့တယ်။
ချစ်ချစ်ကဘော်ဒါရဲ့ရင်ခွင်ထဲမှာ ခေါင်းလေးငုံ့လို့။ ဘော်ဒါရဲ့လက်နှစ်ဖက်လုံးက ချစ်ချစ်ဖင်တွေကိုညှစ်နေတာ။ ကျနော်လဲ ဘော်ဒါလက်တစ်ဖက်ကို ဆွဲပြီး ချစ်ချစ်ဘော်ဒါကြားရှေ့ကိုတွန်းပို့ နောက်လက်တစ်ဖက်ကို ချစ်ချစ်ပခုံးပေါ်တင်ပေးလိုက်ပြီး ချစ်ချစ်ရဲ့ခါးကိုစုံကိုင်ပြီး သူ့ဖင်တွေကို ကျနော့်လီးနဲ့ထောက်လိုက်တာပေါ့။ ချစ်ချစ်ရဲ့ရှေ့ကိုရောက်သွားတဲ့ ဘော်ဒါရဲ့လက်က စကတ်အောက်ကနေ နှိုက်လိုက်တာဖြစ်မယ်။ ချစ်ချစ်ဖင်တွေ နောက်ကို ပိုကော့လာပြီး ကျနော့်လီးကို စောစောက ဘော်ဒါကိုလုပ်သလို စကောဝိုင်းလာတယ်။ တစ်ကယ်မိုက်တယ်။ မြင်ရတာကရော ဖင်နဲ့ပွတ်ပေးတာရော ကောင်းလွန်းလို့ ပြီးချင်သလိုတောင် ဖြစ်လာတာ။မနည်းထိန်းလိုက်ရတယ်။
ဘော်ဒါကို ဖက်ထားတဲ့ ချစ်ချစ်လက်တစ်ဖက်ကိုဆွဲပြီး ဘော်ဒါရဲ့ ဘောင်းဘီရှေ့နားကို ပို့ပေးလိုက်တော့ ချစ်ချစ်က ဘော်ဒါရဲ့ ဖောင်းနေတဲ့ ဘောင်းဘီခွကြားကို ပွတ်တော့တာပဲ။ ကလပ်ထဲမှာသာမဟုတ်ရင် ချစ်ချစ်က ဘော်ဒါကိုဘောင်းဘီချွတ်ပြီး လီးကိုကိုင်မလားမသိဘူး။ အခုလို ဘော်ဒါကိုနှိုက်ခိုင်း. ဘော်ဒါရဲ့လီးကို ကိုင်ခိုင်းတာကို ချစ်ချစ်က မငြင်းတဲ့အပြင် ဘာမှမပြောဘူး။ သူကိုယ်တိုင်စိတ်ပါလက်ပါ လုပ်နေတာ။ မူးနေတာရော ကျနော်မဟုတ်တဲ့ တခြားယောက်ျားရဲ့ အထိအတွေ့ကို လိုချင်နေတာရော ပါမယ်ထင်တယ်။
အဲဒီအချိန်မှာ ရုတ်ရုတ်ဖြစ်ပါလေရော။ အဲဒါနဲ့ ကျနော်လဲ ချစ်ချစ်လက်ကို ဆွဲပြီး အပြင်ထွက်လာခဲ့လိုက်တော့ ဘော်ဒါလဲ နောက်ကနေကပ်လိုက်လာပြီး
” ပြန်တော့ မလို့လားကွ….. အစောကြီးရှိသေးတယ်…. ခဏနေကြရင် ငြိမ်သွားမှာပါ…
” မဟုတ်ဘူးကွ…. ဟော်တယ်ကို ဒိုးတော့မယ် …ဒီနေ့အိမ်မှာ ဧည့်သည်တွေ ရောက်နေလို့ လွတ်လွတ်လပ်လပ်နေရအောင် ဟော်တယ်မှာသွားအိပ်မလို့…. ဘိုကင်တောင်လုပ်ထားပြီးပြီ တင်းနေတာတွေကပေါက်ထွက်တော့မယ်… လျှော့ဖို့လိုအပ်နေပြီ… ဟုတ်တယ်မလား… ချစ်ချစ်…”
ဘော်ဒါကိုပြောရင်း မိန်းမကိုပါ ပြောလိုက်တယ်။ မိန်းမကတော့ ကျနော့်ကိုဖက်ထားပြီး ဘာမှပြန်မပြောဘူး။ ဘော်ဒါက
” ငါတို့ရပ်ကွက်မှာ မီးပျက်နေတာ… ပျင်းစရာကြီး… မင်းတို့နဲ့ ဟော်တယ်မှာပဲ လိုက်အိပ်တော့မယ်.. စကားလေးဘာလေး ပြောရတာပေါ့… “
” အေး… အဲဒါတော့.. မင်းသဘောပဲ… “
ဟော်တယ်ရောက်တော့ ဘော်ဒါက ရီဆက်ရှင်မှာ အခန်းယူရင်း ကျန်နေခဲ့တယ်။ ကျနော်တို့လင်မယားကတော့ ဘိုကင်လုပ်ထားပြီးသားဆိုတော့ အခန်းထဲကို တန်းသွားတာပေါ့။ အခန်းတံခါးပိတ်ပြီးတာနဲ့ တံခါးဝမှာပဲ မိန်းမကို ကစ်ဆင်ဆွဲရင်း အင်္ကျီတွေ စကတ်တွေကို ခပ်ကြမ်းကြမ်း ဆွဲချွတ်လိုက်ရင်း ကျနော့် အဝတ်အစားတွေကိုပါ ချွတ်လိုက်တယ်။ ဘရာနဲ့ ဂျီစထရင်းလေးကိုတော့ မချွတ်သေးဘူး။ ကျနော်က ဘရာနဲ့ ဂျီစထရင်း ဝတ်ထားရင်း လိုးရတာကို အရမ်းကြိုက်တာ။ မိန်းမရဲ့စောက်ဖုတ်ကိုနှိုက်လိုက်တော့ အရေတွေက ထွက်နေတုံးပဲ။ မိန်းမကလည်း ကျနော့်လီးကို အတင်းပဲဆွဲနေတာ။ သူလဲ အရမ်းအလိုးခံချင်နေပြီနဲ့တူတယ်။
ကျနော်လဲ လက်တစ်ဖက်က စောက်ဖုတ်ကိုနှိုက်။ နောက်လက်တစ်ဖက်က စောက်ဖုတ်အရေတွေနဲ့ စိုအောင်လုပ်ပြီး ဖင်ပေါက်ထဲကိုပါ အသွင်းအထုတ် လုပ်ပေးလိုက်တယ်။ စောက်ဖုတ်နဲ့ဖင်ပေါက် တပြိုင်နက် ကလိပေးနေတာလေ။ ဖင်က ကျနော်လိုးနေကျဆိုတော့ လက်ချောင်းလောက်ကတော့ ရှောရှောရှူရှူပဲ။ စောက်ဖုတ်နဲ့ဖင်ကိုနှိုက်နေရင်း
” ချစ်ချစ်စောက်ဖုတ်ကို အခု.. ကိုကိုနှိုက်ပေးတာနဲ့ စောစောက ကိုကို့ဘော်ဒါနှိုက်ပေးတာ ဘယ်ဟာပိုကောင်းလဲ…. ပြီးတော့…. ကိုကိုလီးနဲ့ ဟိုကောင့်လီး… ဘယ်သူ့ဟာပိုကြီးလဲဟင်… ချစ်ချစ်…”
” ကိုကို ကလဲ …ဘာတွေမေးနေမှန်းလဲ…. မသိဘူး…”
” ချစ်ချစ်စောက်ဖုတ်ကို ဟိုကောင်နှိုက်နေတာ…. သူ့လီးကို…. ချစ်ချစ်.. ပွတ်ပေးနေတာ.. ကိုကို မြင်နေတာပဲဟာ ပြောစမ်းပါချစ်ချစ်ရဲ့ … ချစ်ချစ်လဲ ဟိုကောင်နှိုက်ပေးတာ… သူ့လီးကို ကိုင်ရတာ ဖီးလာတယ်မလား…”
” ကိုကိုနှိုက်တာကျတော့… ကိုကိုက ချစ်ချစ်ယောက်ျားလေ… ကိုကို့ သူငယ်ချင်းနှိုက်တာကျတော့ သူစိမ်းယောက်ျားတစ်ယောက်လေ… ပြီးတော့ ကိုကိုရှေ့တင် အနှိုက်ခံနေရတာဆိုတော့ ပိုကောင်းတယ်ထင်တာပဲ သူ့လီးက ကိုကိုထက်ပိုကြီးတယ်ထင်တယ်… ဘောင်းဘီပေါ်ကကိုင်ရတာကို သိသာတယ်… ဟိဟိ..”
” အဲဒါဆို အခုသူ့လီးနဲ့လိုးတာ မခံကြည့်ချင်ဘူးလား…” လို့မေးလိုက်မိတယ်။ ဘာလို့အဲလိုမေးလိုက်မိမှန်း ကိုယ့်ကိုကိုယ်တောင် မသိလိုက်ဘူး။
” ကိုကိုက ကြည်ဖြူလို့လား…. “
” ကိုကိုမိန်းမလေးကို ခံစားမှုအသစ်လေးတွေနဲ့ ရင်ခုန်စေချင်လို့ပါ… “
” ကိုကို မ်ိန်းမနဲ့ တခြားယောက်ျားတစ်ယောက် လိုးနေတာကိုလဲ ကိုကိုကြည့်ချင်နေတာ…”
” အခုချစ်ချစ်ကို ကိုကိုနှိုက်နေသလို စောက်ဖုတ်ကိုတစ်ယောက် ဖင်ကိုတစ်ယောက် တူးအင်ဝမ်းလိုးမယ်လေ..”
အဲဒီလို ပြောနေရင်းနဲ့ ဘော်ဒါက ကျနော့်မိန်းမကို တက်လိုးနေတဲ့ မြင်ကွင်းကို ဘေးကနေထိုင်ကြည့်ချင်တဲ့စိတ်တွေ ပေါ်လာတယ်။ ကျနော်မဟုတ်တဲ့ယောက်ျားတစ်ယောက်က မိန်းမကိုလိုးနေတဲ့အချိန် မိန်းမရဲ့တုံ့ပြန်မှုက ဘယ်လိုနေမလဲသိချင်လာတယ်။
ကိုကိုပြောနေတာနဲ့ ချစ်ချစ်လေ… စောက်ဖုတ်ထဲကရော …ဖင်ထဲကရော.. ယားလာပြီကွာ…. ကြမ်းကြမ်းလေး နှိုက်ပေးပါ…. တစ်ကယ်တောင် အလိုးခံချင်လာပြီ… ဟိဟိ… “
အဲဒီအချိန်မှာပဲ တံခါးခေါက်သံ ထွက်လာတယ်။ ကျနော်တို့ နှစ်ယောက်လုံး လန့်သွားတာပေါ့။ တံခါးလာခေါက်တဲ့လူကို တော်တော်တင်းသွားတယ်။ အဲဒါနဲ့ ရေချိုးခန်းထဲက သဘက်တွေယူပြီး မိန်းမက ရင်ရှားလိုက်သလို ကျနော်လဲ ပတ်လိုက်ပြီး တံခါးကိုဖွင့်ကြည့်လိုက်တော့ ဘော်ဒါဖြစ်နေတယ်။ ဘော်ဒါက စပ်ဖြီးဖြီးနဲ့
” ငါ့မှာ ဆေးလိပ်ပါမလာလို့…. မင်းမှာရှိသေးလားလို့..လာတောင်းတာ.. ဟီးဟီး…”
” မင်းတော်တော်နှောင့်ယှက်တဲ့ကောင်ပဲ… ကောင်းခန်းရောက်နေပြီဟ… “
” ဟာ… ကောင်းခန်းရောက်နေပြီလား… ငါလည်းအဲဒီကောင်းခန်းကို ကြည့်ချင်နေတာ… ဟီးဟီး…”
ကျနော်လဲ ဘော်ဒါကမိန်းမကို လိုးတဲ့အကြောင်းပြောနေရင်း ဘော်ဒါရောက်လာတော့ စိတ်ထဲမှာပေါ်လာတဲ့ အကြံတစ်ခုကို ချက်ချင်း အကောင်အထည်ဖော်ဖို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။
” စောက်ခွက်ပြောင်မနေနဲ့… ဆေးလိပ်ဗူးက အခန်းထဲမှာ… ပိုက်ဆံအိတ်ဘေးနားမှာ ထားထားတယ်.. ယူမသွားနဲ့ ဆေးလိပ်ကနဲနေပြီ… အခန်းထဲမှာပဲသောက်… ” လို့ပြောပြီး ဘော်ဒါ အခန်းထဲဝင်သွားတာနဲ့ တံခါးကို လော့ချလိုက်တယ်။
ချစ်ချစ်က သဘက်ကို ရင်လျှားပြီး ကတင်ပေါ်မှာထိုင်နေတာ။ ဘော်ဒါက ချစ်ချစ်ရဲ့ ရှေ့နားက ခုံမှာဝင်ထိုင်ပြီး ဆေးလိပ်သောက်တယ်။ ကျနော်လဲချစ်ချစ်ဘေးမှာ ၀င်ထိုင်လိုက်ပြီး ချစ်ချစ်ကိုဖက်လိုက်ရင်း
” အနှောင့်အယှက်ကောင်က ဆေးလိပ်သောက်ချင်လို့တဲ့မိန်းမရေ… ကောင်းခန်းရောက်နေပါပြီ ဆိုတာကို ကြည့်ချင်တယ်ဆိုပြီး အခွက်လာပြောင်နေသေးတယ် “
” ချစ်ချစ်ကတော့ ဂရုမစိုက်ပေါင်… ပရိတ်သတ်ရှိလို့ကတော့ ပိုတောင်လုပ်ပြလိုက်အုံးမယ်… “
ချစ်ချစ်ကအဲလိုလဲပြောရော ဘော်ဒါက လက်ခုပ်ထတီးတယ်။ ကျနော်လဲ ချစ်ချစ်ရင်လျှားထားတဲ့ သဘက်ကိုခါးထိရောက်အောင်ဖြေချ၊ ဘရာထဲကိုလက်ထဲ့လိုက်ပြီး နို့တွေကို နှိုက်လိုက်တယ်။ ချစ်ချစ်က ပိုတောင်ဟော့နေသေးတယ်။ တဘက်ကိုလုံးဝဖယ်လိုက်ပြီး ပေါင်ကိုကား စောက်ဖုတ်ကို ပင်တီပေါ်ကနေ ပွတ်ရင်း ဘော်ဒါကို ကြည့်နေလိုက်သေးတယ်။ ဘော်ဒါရဲ့မျက်လုံးတွေက ချစ်ချစ်ရဲ့ပေါင်ကြားမှာ။ ချစ်ချစ်လဲ စောက်ဖုတ်ကို ပင်တီပေါ်ကနေပွတ်နေယုံမဟုတ်တော့ဘဲ အထဲကိုလက်ထည့်ပြီး စောက်ဖုတ်ထဲကို အသွင်းအထုတ်ပါ လုပ်တာ။ ကျနော်လဲ ဘော်ဒါပိုမြင်အောင် ဘောင်းဘီလေးကို တစ်ဖက်ကပ်ပေးလိုက်ပြီး ပေါင်တွေကိုလဲ ပိုဖြဲပေးလိုက်တယ်။ ဘော်ဒါက ထိုင်ခုံမှာမှီထိုင်နေရာကနေ ကိုယ်ကိုရှေ့ကိုင်းပြီး ချစ်ချစ် စောက်ဖုတ်ကိုသေချာကြည့်နေတာ။ ချစ်ချစ်က ထိုင်နေရာနေထပြီး ဘော်ဒါရှေ့မှာ ဖင်ကုန်းပြီး ကျနော့်လီးကို စုပ်ပေးတယ်။
ချစ်ချစ်ရဲ့လက်တွေကတော့ သူ့စောက်ဖုတ်ကို သူနှိုက်နေတုံးပဲ။ ဘောင်းဘီလေးက ကျနော်ဘေးကပ်ပေးထားတဲ့ အတိုင်းဆိုတော့ ဘော်ဒါထိုင်နေတဲ့နေရာကကြည့်ရင် ချစ်ချစ်ရဲ့စောက်ဖုတ်ကိုရော နှိုက်နေတဲ့ လက်တွေကိုရော လက်ချောင်းတွေ စောက်ဖုတ်ထဲ ၀င်လိုက်ထွက်လိုက် ဖြစ်နေတာတွေကိုရော အနီးကပ်မြင်နေရမှာ။ ဘော်ဒါလဲ ချစ်ချစ်စောက်ဖုတ်ကို ယက်ချင်နေလားမသိဘူး။ နှုတ်ခမ်းတွေ လျှာတွေသပ်နေတာ။ ချစ်ချစ်က သူ့လက်နောက်တစ်ဖက်နဲ့ သူ့ဖင်ထဲကိုသူ ထပ်တောင်နှိုက်နေလိုက်သေးတယ်။ ကျနော့်လီးကိုစုပ်နေရာကနေ မျက်နှာနားကပ်လာပြီး
” .. ကိုကို… ချစ်ချစ် ရေချိုးခန်းထဲသွားလိုက်အုံးမယ်… ကိုကို့ဘော်ဒါကိုမေးလိုက်ပါအုံး… ချစ်ချစ်စောက်ဖုတ်ကို လုပ်ချင်ရဲ့လားလို့… တော်ကြာ … ချစ်ချစ်တို့က လုပ်ခိုင်းလို့ …. လုပ်ရပါတယ် ဖစ်နေအုံးမယ်…. ခိခိ… ကိုကို့ ဘော်ဒါ ချစ်ချစ်ကို လိုးချင်တယ်ဆိုလည်း… ချစ်ချစ်ဘာတွေကြိုက်တယ်ဆိုတာ …. ပြောထားလိုက်အုံး… ကိုကို့ ကိုမှ မမှီရင် sorry ပါလို့ …. ခစ်ခစ်… “
ပြောပြီးထွက်သွားတော့ ဘော်ဒါက လမ်းလျှောက်လို့ လှုပ်သွားတဲ့ ချစ်ချစ်ရဲ့ဖင်တွေကို သွားရည်တမြားမြားနဲ့ လိုက်ကြည့်နေတာ။
” .. ဟေ့ရောင် ဇာတ်ကြီးလဲ လိမ်သွားအုံးမယ်….
” .. မင်းမိန်းမကလှလွန်းလို့ လိုက်ကြည့်မိတာပါကွာ .. စောက်ဖုတ်လေးနဲ့ ဖင်လေးကို အနီးကပ် မြင်လိုက်ရတာ ငါ့စိတ်တွေတောင် ထိန်းလို့မရတော့ဘူး.. မင်းမိန်းမသာ မဟုတ်ရင် … ငါဆွဲပြီး ကောင်းကောင်း ယက်ပစ်လိုက်တယ် .. စောက်ဖုတ်လေးက .. အရေတွေကို … စိုပြီး.. နှုတ်ခမ်းသားလေးတွေက အိနေတာပဲ ဟီးဟီး.. တစ်ကယ်ပြောရရင် … စောက်ဖုတ်လေးကိုရော… ဖင်ကိုရော .. ပယ်ပယ်နယ်နယ် ယက်ပြီးတော့ လိုးပလိုက်ချင်တာ … “
” .. အေး… ဟုတ်ပြီလေ… ငါ့မိန်းမကလဲ … မင်းလီးကို ရင်ခုန်နေတာ … ငါလဲ3some စမ်းချင်နေတယ်.. ဒါပေမဲ့ … ငါ့မိန်းမနဲ့ ငါခိုင်းတဲ့အတိုင်းပဲ မင်းလုပ်ရမယ်… မင်းသဘောနဲ့ မင်း.. ဘာမှမလုပ်ရဘူး… ငါက ဒါမှမဟုတ်.. မိန်းမက စိတ်မပါတော့ဘူးဆိုတာနဲ့ … မင်းရပ်ရမယ်… အဲဒီအချက်တွေကို မင်းသဘောတူတယ်ဆိုရင်တော့ …. မင်းဖြစ်ချင်တာ ဖြစ်ရမှာပေါ့… သဘောမတူဘူး… ဆိုရင်တော့ …. မင်းပြန်လို့ရပြီ “
” .. သဘောတူပါတယ်ကွာ… မင်းတို့စိတ်တိုင်းကျရပါစေမယ်… ဟီးဟီး.. မင်းပြောတာကိုသာ မင်းမဖျက်နဲ့… “
“.. အေး.. ငါချစ်ချစ်ပြန်ထွက်လာရင် ပြောကြည့်လိုက်မယ်…”
ကျနော်တို့ ပြောနေတုံးမှာဘဲ ချစ်ချစ်ရေချိုးခန်းထဲက ပြန်ထွက်လာပြီး ကျနော်တို့ နှစ်ယောက်ကြားမှာ လာရပ်ရင်း…
” ကိုကိုတို့ ဘာတွေပြောနေကြတာလဲ .. ချစ်ချစ်ကို မဟုတ်တာတွေ ကြံစည်နေတာမလား …”
” မဟုတ်တာတွေ မဟုတ်ပါဘူး … ဟုတ်တာတွေပါချစ်ချစ်ရဲ့.. ဒီကောင်က ဒီည ချစ်ချစ်ကို မချစ်ရရင် သေရပါတော့မယ်တဲ့. ချစ်ချစ်သဘောကျ … စိတ်တိုင်းကျရပါစေမယ်တဲ့ … ချစ်ချစ် သဘောကိုမေးမလို့ စောင့်နေတာ.. လူ့အသက်တစ်ချောင်း ကယ်ကောင်းပါတယ် …. ကိုကို့ ဘော်ဒါက ချစ်ချစ်ကို တက်သာမလုပ်ရသေးတာ … ချစ်ချစ်နို့တွေကိုရော .. စောက်ဖုတ်ကိုရော.. နှိုက်ထားတာမှ ပယ်ပယ်နယ်နယ်ရယ်… “
” အသက်တစ်ချောင်း ကယ်လိုက်ပါမယ်လေ … ဟိဟိ.. ဒါပေမဲ့ ချစ်ချစ် စိတ်တိုင်းမကျတော့ရင်တော့ ချက်ချင်း ရပ်ပစ်ရမယ်… “
” ချစ်ချစ်သဘောတူတယ်ဆိုတော့ … ချစ်ချစ်ကို .. ကိုကိုမေးမလို့ … ကိုကို့ကိုလဲ မချန်ထားရဘူးနော် …”
” မချန်ထားပါဘူး ကိုကိုရဲ့ …”
” ဒါဆို ချစ်ချစ် ဘယ်သူ့ကို အရင်ရွေးမှာလဲ…”
” ကိုကို သူငယ်ချင်းအသက်ကို အရင်ကယ်လိုက်ပါမယ် .. ကိုကိုရယ် .. တော်ကြာသေသွားမှဖြင့် .. ချစ်ချစ်တို့ အမှုပါတ်နေပါအုံးမယ် ကိုကို့ ကိုရှယ်ပြန်ပြုစုပေးမှာပါ … နော် .. ကိုကိုတို့ ပြောနေတာနဲ့ .. ချစ်ချစ်စိတ်တွေ အရမ်းလာနေပြီကွာ … အပြောလေးတွေရပ် … အလုပ်လေးတွေ စ ရအောင် .. ကဲ .. ဟိုလူကြီး အတွင်းခံဘောင်းဘီပဲ ချန်ပြီး.. ကျန်တာတွေ အကုန်ချွတ် … ချစ်ချစ်ဆီကို ဒူးထောက်လာခဲ့…. စောက်ဖုတ်ယက်ခိုင်းမလို့ …”
ဘော်ဒါလဲ ချစ်ချစ်ပြောတာနဲ့ အ၀တ်တွေချွတ်ပြီး ချစ်ချစ်နားကို ဒူးထောက်ပြီးသွားတယ်။ ချစ်ချစ်ကမတ်တပ် ဘော်ဒါက ဒူးထောက်ရက်သားဆိုတော့ … ချစ်ချစ်ရဲ့နို့တွေနဲ့ သူ့မျက်နှာနဲ့ကတန်းနေတာပေါ့။
” ချစ်ချစ်ရဲ့နို့တွေကို လျှာနဲ့ယက်ပေး… ပြီးရင်ဗိုက်သားတွေ …. ပြီးရင်ပေါင်နှစ်ဖက်…. လက်တွေက ဖင်တွေကိုညှစ်ပေး… “
ဘော်ဒါလဲ ချစ်ချစ်ခိုင်းတဲ့အတိုင်း နို့တွေကို လျှာနဲ့ယက် အဲဒီကနေ ဗိုက်လေးတွေကို လျှာနဲ့ယက်ရင်း တဖြေးဖြေး အောက်ကိုဆင်းသွားတယ်။ ဒီကောင်လျှာနဲ့ယက်ခဲ့တဲ့နေရာတွေမှာ တတွေးတွေ စိုပြီးကျန်နေခဲ့တာ။ ချစ်ချစ်ကလား။ လက်တစ်ဖက်က သူ့နို့တွေကို သူညှစ်လိုက် ၊ စောက်ဖုတ်ကိုပွတ်လိုက်နဲ့။ နောက်လက်တစ်ဖက်က ဘော်ဒါရဲ့ခေါင်းကို ကိုင်ပြီးတော့ သူယက်စေချင်တဲ့နေရာတွေကို ထိန်းပြီးပြပေးနေတယ်။ ချစ်ချစ်က ဘော်ဒါရဲ့ခေါင်းကိုကိုင်ပြီး ခွာလိုက်တယ်။ ပြီးတော့ ဘော်ဒါရဲ့ ပခုံးပေါ်ခြေထောက်တစ်ဖက် တင်လိုက်ပြီး သူ့စောက်ဖုတ်နဲ့ မျက်နှာနဲ့ကို ကပ်ပေးလိုက်တယ်။ ကျနော်လဲ ဘော်ဒါချစ်ချစ်စောက်ဖုတ်ကို ယက်နေတာကိုကြည့်ပြီး ကျနော်တောင် ဝင်ယက်ချင်လာတယ်။ ဘော်ဒါရဲ့လက်တွေကတော့ ဖင်တွေကိုညှစ်နေတုံးပဲ။
ချစ်ချစ်က ဘောင်းဘီပေါ်ကနေပဲ အယက်ခံနေရတာ အားမရလို့ထင်တယ်။ ဘောင်းဘီ တစ်ဖက်ဆွဲလိုက်ပြီး
စောက်ဖုတ်ပေါ်လာအောင် ဖေါ်ပေးလိုက်ပြီး စောက်ဖုတ်အယက်ခံရင်း သူ့ဟာနဲ့ ဘော်ဒါရဲ့ မျက်နှာကိုပွတ်နေတာ။ ဘော်ဒါရဲ့ မျက်နှာမှာ စောက်ရေတွေရော သူ့တတွေးတွေရောပြန်ပေပြီး ရွှဲနေတာပဲ။ ချစ်ချစ်က …
” ဘောင်းဘီချွတ်ပေးတော့ကွာ…. အစိကိုစုပ်ရင်း … အထဲကိုနှိုက်ပေး…. ” အစိအစုပ်ခံရင်း …. စောက်ဖုတ်အနှိုက်ခံနေရင်း ချစ်ချစ်ပိုဟော့လာတယ်ထင်တယ်။
” အား… ကောင်းလိုက်တာ …. ကျမရဲ့ စောက်ပတ်ကို ယက်ပေးစမ်းပါ… လက်တွေနဲ့လဲ …. နှိုက်ပေးစမ်းပါ… အား … မိုက်တယ်ကွာ…. အရမ်းကောင်းတာပဲ ….”
ထုတ်ပြောလာတဲ့အပြင် ဘရာကိုချွတ်ချလိုက်ပြီး သူ့နို့တွေကိုသူ ပယ်ပယ်နယ်နယ်ကို ညှစ်လာတယ်။ သူ့ဖင်ပေါက်ကိုပါ သူနှိုက်လာတာတွေ့ရတယ်။
” အား… ကောင်းလိုက်တာရှင်ရယ် …. ဖင်ပါအယက်ခံချင်လာပြီ …. ကုတင်ပေါ်မှာ ကုန်ပေးမယ် …. ဖင်ဖြဲပြီး ဖင်ယက်ပေးပါအုံး….. “
ချစ်ချစ်ကတင်စောင်းမှာ ကုန်းပေးတော့ ဘော်ဒါက နောက်ကနေ ဖင်ဖြဲပြီး စောက်ဖုတ်နဲ့ဖင်ကို လျှာအပြားလိုက်နဲ့ ယက်ပေးနေတာ။
” အားမိုက်တယ်ကွာ… စောက်ပတ်ထဲ လက်နဲ့ နှိုက်ပေးအုံးလေ…. ဖင်ပေါက်ကိုပါ လျှာနဲ့ထိုးပေး … အား…. ကောင်းတယ်ကွာ …. ဖင်ထဲဝင်လာပြီ…. ဟုတ်တယ် …. အဲဒီလိုထိုးခိုင်းတာ …. အမလေး … အရမ်းမိုက်လိုက်တာ …. အရမ်းကောင်းလာပြီ…. အဲဒီအတိုင်းဆက်ထိုးပေး.. ပြီးတော့မယ် … စောက်ပတ်ထဲက လက်ကိုလဲ သွက်သွက်လေး….. “
ဘော်ဒါလဲ ကြမ်းပြင်ပေါ်မှာ ပက်လက်ကြီးလန်သွားတယ်။ ဘာဂျာ အသားကုန်ပေးလိုက်ရတော့ ပြိုင်းသွားမှာပေါ့။ ကျနော်လဲ ချစ်ချစ်ဘေးမှာ သွားလှဲရင်း ချစ်ချစ်ရဲ့နဖူးလေးကို အသာအယာ နမ်းလိုက်ပြီး ဆံပင်လေးတွေကို ပွတ်ပေးနေလိုက်တယ်။ ချစ်ချစ် အမောပြေပြီထင်တဲ့ အချိန်မှ
“ကောင်းတယ်။ ကိုကို့ဘော်ဒါက ဖင်ထဲကိုလျှာနဲ့ထိုးပေးတာ စောက်ရမ်းမိုက်တယ် ကိုကိုရော ကြည့်လို့ကောင်းလား”
“အင်း ပြီးသွားတယ်။ ဒါပေမယ့် စောက်ဖုတ်ထဲမှာ ယားနေတုံးပဲ အလိုးခံချင်နေသေးတယ်။ ကိုကိုသူငယ်ချင်း လီးကြီးက ဘောင်းဘီထဲမှာ ဖုထွက်နေတာကြည့်ပြီး အသဲတွေယားပြီး စောက်ဖုတ်ထဲကပါ လှိုက်လှိုက်ပြီး ယားလာတာ ဟိဟိ”
“ဒါဆိုသူ့လီးနဲ့ အရင်ခံမှာပေါ့ ဟုတ်လား”
“ဟုတ် ပြီးမှ ကိုကို့အတွက် ရှယ်အစီအစဉ်ရှိပါတယ် ကိုကိုရဲ့ ကိုကိုပဲ ချစ်ချစ်ကို ကိုကို့သူငယ်ချင်းလိုးတာ ကြည့်ချင်တယ် ဆို”
“အေးပါ အေးပါ ဟုတ်ပါပြီ”
“ကိုကို့သူငယ်ချင်းကို မေးကြည့်ပါအုံး အမောပြေပြီလားလို့ ချစ်ချစ်က ready ပါလို့”
“ကဲ ဟေ့ကောင် ငါ့မိန်းမက မင်းကိုခေါ်နေပြီ ဘယ်လိုလဲ လက်နက်ချသွားပြီလား ဒါဆိုရင်တော့ ပွဲကြည့် ပရိတ်သတ်ပဲ လုပ်တော့တဲ့”
“လက်နက်ဘယ်ချမလဲကွာ သေရင်သေပစေ ဟိဟိ”
ပြောရင်း ကျနော်နဲ့ ချစ်ချစ် လှဲနေတဲ့ ဘေးနားရောက်လာတယ်။ “ချစ်ချစ်က ဒါရိုက်တာလုပ်မယ် ကိုကိုတို့က ချစ်ချစ်ခိုင်းတဲ့ အတိုင်းလိုက်လုပ်ကြ ကဲအခု ချစ်ချစ်နို့ကို နှစ်ယောက်တူတူစို့ပေး စို့ပေးနေရင်း ချစ်ချစ်က လီးနှစ်ချောင်းလုံးကို ကိုင်ထားချင်လို့” ကျနော်နဲ့ဘော်ဒါလဲ ချစ်ချစ်ရဲ့ နို့နှစ်ဖက်ကို ပြိုင်တူ စို့လိုက်ကြတယ်။ အဲ့ဒီချိန်မှာ ချစ်ချစ်က လီးနှစ်ချောင်းလုံးကို ကိုင်ပြီး ဂွင်းထုပေးနေတာ။ “အား နို့နှစ်ဖက်လုံး အစို့ခံရတာ မိုက်တယ်ကွာ ကိုကိုက ချစ်ချစ်ဖင်ပေါက်ထဲကို နှိုက်ပေးကွာ ရှင်က စောက်ပတ်ထဲကို နှိုက်ပေးကွာ အားပါးပါး တကယ်မိုက်တယ်ကွာ စောက်ပတ်ရော ဖင်ရော နို့တွေရော တကယ် ထိတယ်ကွာ” ကျနော်တို့လဲ ချစ်ချစ်ခိုင်းတဲ့အတိုင်း နို့စို့နေရင်း စောက်ဖုတ်ထဲရော ဖင်ထဲရော နှိုက်ပေးလိုက်တယ်။ စောက်ဖုတ်ထဲက အရေတွေက စီးကျနေတာဆိုတော့ ဖင်ပေါက်ကို ဆီ ဆွတ်စရာတောင် မလိုဘူး smooth ဖြစ်နေတယ်။
“ကဲကွာ ဒီတစ်ခါ စောက်ပတ်ကိုရော ဖင်ကိုရော အတူတူ ယက်ပေးကြကွာ ကိုကိုက ပက်လက်လှန်လိုက်” ဆိုပြီး ကျနော့်ပေါ်ကို ပြောင်းပြန်တက်ခွလာတယ်။ “69” ပုံစံပေါ့။ ကျနော်လဲ မျက်နှာရှေ့ရောက်လာတဲ့ ချစ်ချစ်စောက်စိလေးကို သကြားလုံးစုပ်သလို အရင်စုပ်လိုက်ပြီး ယက်ပေးနေလိုက်တယ်။ ဘော်ဒါကလဲ ဖင်ဖြဲပြီး ဖင်ပေါက်လေးကို ပယ်ပယ်နယ်နယ် ယက်ပေးနေတာကိုလဲ တွေ့နေရတယ်။ ဒီတစ်ခါ စောက်ပတ်နဲ့ဖင် တပြိုင်နက် အယက်ခံနေရတဲ့ ချစ်ချစ်ဆီက ဘာသံမှ ထွက်မလာတော့ဘူး။ ကျနော့်လီးကို စုပ်နေလို့လေ။ ကျနော်လဲ အရမ်းကောင်းလာတာနဲ့ ချစ်ချစ်ရဲ့ ခေါင်းကိုထိန်း ကော့ကော့ပြီး ပါးစပ်ကို လိုးလိုက်တော့ ချစ်ချစ်လဲ ကျနော်ပြီးချင်လာတာ သိလို့ထင်တယ်။ အားပြင်းပြင်းနဲ့ စုပ်ပေးတဲ့အပြင် သူ့ပါးစပ်ထဲဝင်လာတဲ့လီးကို လျှာနဲ့ပါထိန်းပြီးယက်ပေးလာတယ်။ လက်တစ်ဖက်က ဥတွေကို လာပွတ်ပေးတော့ ကျနော်လဲ မထိန်းနိုင်တော့ပဲ သူ့ပါးစပ်ထဲပဲ အရေတွေ ပန်းထုတ်လိုက်တာပေါ့။ ကျနော်ပြီးသွားပြီး အရေတွေကုန်သွားတဲ့ထိ စုပ်ပေးရင်း အရေတွေကမျိုချပေးတာ။ ကျနော်နဲ့ ဘော်ဒါကြားကို လှိမ့်ဆင်းလာပြီး ကျနော့်ကို လာဖက်ထားတယ်။ သူ့ဖင်တွေကတော့ ဟိုကောင့်ဖက်ကို ပစ်ထားတုန်း။ ဘော်ဒါကလဲ ဖင်ဖြဲပြီး ယက်နေတုန်းပဲ။
“ကောင်းတာပေါ့ကွယ် ကိုကို့မိန်းမလေးက အရမ်းချစ်ဖို့ကောင်းတာပဲ”
“ကိုကို့ အရေတွေ မျိုချပြီးတော့ စောက်ဖုတ်ထဲကလေ အရမ်းယားလာတာ သိလား စောက်ဖုတ်ကို လီးနဲ့ အလိုးခံချင်နေပြီကွာ”
“ကိုကို့ဘော်ဒါကို လိုးခိုင်းလိုက်ရတော့မလား ကိုကိုက အားမွေးရင်းနဲ့ ကြည့်နေပေါ့ ကိုကို့ဟာ ပြန်တောင်လာမှ ကိုကို့အတွက် ရှယ်အစီအစဉ် စကြတာပေါ့”
“အေးပါကွယ် ဟုတ်ပါပြီ ချစ်ချစ် သဘော”
“ဟိုလူကြီး လုပ်တော့ကွာ ချစ်ချစ်လိုချင်နေပြီ ချစ်ချစ်ကိုင်ပြီး ထည့်ပေးမယ် ရှင့်ဟာကြီးက အကြီးကြီး ချစ်ချစ်ဟာလေး ကွဲသွားမှာစိုးလို့”
ချစ်ချစ်က ဒူးထောင်ပေါင်ကား ပေးလိုက်တော့ ဟိုကောင်က ကွန်ဒုံးစွပ်လိုက်ပြီး ချစ်ချစ်စောက်ဖုတ်ကို သူ့လီးကြီး တေ့ပေးတယ်။ တေ့ထားတဲ့လီးကို ချစ်ချစ်ကကိုင်ပြီးတော့ မထည့်သေးပဲနဲ့ စောက်ဖုတ် အကွဲကြောင်းအတိုင်း ပွတ်နေသေးတာ။ လီးထိပ်နဲ့လဲ စောက်စိကို ထိုးနေသေးတာတွေ့ရတယ်။ ပြီးတော့မှ စောက်ဖုတ်ထဲကိုထိုးထည့်တော့ ဘော်ဒါက အပေါ်ကနေ အလိုက်သင့်ဖိထည့်ပေးတာ။ လီးကြီးတစ်ခါတည်း အဆုံးထိဝင်သွားမှာ စိုးလို့ထင်တယ်။ လီးကိုကိုင်ထားတဲ့ လက်ကိုတော့ မလွှတ်သေးဘူး။ “အား ၀င်လာပြီကွာ ပြည့်သိပ်နေတာပဲကွာ အဆုံးထိ မထည့်နဲ့အုံး ဒီတိုင်းလေးပဲလုပ်ပေးအုံး ကျပ်သိပ်နေတာပဲကွာ” ဟုတ်တယ်။ လီးကြီးကကြီးနေတော့ စောက်ပတ် အဝလေးဆိုတာ ၀လုံးလေးလို ဝိုင်းနေတာ။ ချစ်ချစ် လက်တစ်ဖက်က သူ့အစိလေးကို သူပွတ်နေသေးတယ်။
“အားပါးပါး မိုက်တယ်ကွာ ဖြေးဖြေးနဲ့ အဆုံးထိဝင်အောင်သွင်းတော့ ကွာ” ဘော်ဒါလဲချစ်ချစ် ခိုင်းတဲ့အတိုင်း သွင်းလိုက်ထုတ်လိုက်နဲ့ လီးကြီးတစ်ချောင်းလုံး စောက်ဖုတ်ထဲ အဆုံးထိဝင်သွားတယ်။ လီးကို အဆုံးထိထုတ် အဆုံးထိပြန်သွင်းနဲ့ လိုးပေးနေတဲ့ ဘော်ဒါရဲ့ခါးကို ချစ်ချစ်က ခြေထောက်တွေနဲ့ ခွလိုက်ရင်း လီးသွင်းတဲ့အချိန်မှာ ဖင်တွေကိုကော့တင်ပေးလိုက် လုပ်ပေးနေတာ။ “အားကိုကိုရာ တကယ်ထိတယ်ကွာ စောက်ဖုတ်ထဲကို အဆုံးထိဝင်တယ်ကွာ သားအိမ်ကိုတောင် လာလာထိတယ်။ မိုက်တယ်ကွာ အား အား တကယ်မိုက်တယ်ကွာ အားမရတော့ဘူး ကျမ ခြေထောက်တွေကို ဆွဲပေးထားမယ် နို့တွေကို ဆွဲပြီး ဆောင့်လိုးပေးစမ်းပါ အား အမလေး ဟုတ်တယ်။ အဲလိုဆောင့်ခိုင်းတာ ကောင်းလိုက်တာ ဆောင့် ဆောင့်”
ချစ်ချစ်က ခြေထောက်တွေကို ပခုံးထိအောင် ဆွဲတင်လိုက်တော့ ချစ်ချစ်ရဲ့ဖင်က မွှေ့ယာနဲ့လွတ်ပြီး ဖင်တွေ ပိုကော့လာတယ်။ စောက်ဖုတ်လဲ ပိုကော့လာတယ်။ ဘော်ဒါလဲ မွှေ့ယာပေါ် လက်တစ်ဖက်ထဲနဲ့ပဲ ထောက်ထားပြီး နောက်လက်တစ်ဖက်က နို့တွေကိုညှစ်ရင်း ဆောင့်ဆောင့်လိုးနေတာ။ ဆီးခုံချင်းရိုက်မိလို့ ထွက်လာတဲ့ ဖတ် ဖတ် ဆိုတဲ့အသံတွေ အရေတွေရွှဲနေတဲ့ စောက်ဖုတ်ထဲ လီးဝင်ထွက်နေတဲ့ အချိန် ထွက်တတ်တဲ့ ပျစ် ပျစ် ပလွတ် ပလပ် ဆိုတဲ့အသံတွေရော ချစ်ချစ်ရဲ့ “အား အားးး ကောင်းလိုက်တာ အရမ်းကောင်းတာပဲ အားးး ဆောင့်လိုးပေးစမ်းပါ စောက်ပတ်ထဲမှာ ပြည့်ကျပ်ပြီး အီစိမ့်နေတာပဲ လိုးလိုး ဆောင့်လိုးလိုက်စမ်းပါ” လို့ အော်နေတဲ့ အသံတွေနဲ့ ပွတ်ပွတ်ကို ညံနေတာ။
ကျနော်လဲ ချစ်ချစ်ဘေးနားတိုးသွားပြီး နှုတ်ခမ်းလေးတွေကိုနမ်းရင်း နို့သီးလေးတွေကို ညှစ်နေ ပေးလိုက်တယ်။ ပြီးတော့ သူ့မျက်နှာပေါ်ကန့်လန့် မှောက်လိုက်ပြီး နှုတ်ခမ်းနှစ်လွှာထဲကို လီး ထိုးထည့်ပြီး ပါးစပ်ကို လိုးနေလိုက်တယ်။ ခဏနေတော့ချစ်ချစ်က လီးကို ပါးစပ်ကနေ ဆွဲထုတ်လိုက်ရင်း “ဟိုလူကြီး ရှင်ပက်လက်အိပ်လိုက် ကျမအပေါ်ကနေတက်ဆောင့်မယ် ကိုကို မတ်တပ်ရပ်လိုက် ဆက်စုပ်ပေးမယ်နော်”
ကျနော်တို့လဲ ချစ်ချစ်ခိုင်းတဲ့အတိုင်း နေရာတွေပြင်လိုက်ကြပြီး ချစ်ချစ်က ဘော်ဒါရဲ့ ကိုယ်ပေါ်မှာ တက်ခွလိုက်တယ်။ ဘော်ဒါရဲ့ လက်နှစ်ဖက်ကိုဆွဲပြီး သူ့နို့တွေပေါ်တင်ပေးလိုက်တာနဲ့ ဘော်ဒါကလဲ နို့တွေကို ညှစ်တော့တာပဲ။ ချစ်ချစ်က တက်သာခွထားတာ လီးကိုမသွင်းသေးပဲ ကိုင်ြ့ပီး စောက်ဖုတ် အကွဲကြောင်းအတိုင်း ပွတ်နေသေးတယ်။ ကျနော်လဲဘေးနားထိုင်ပြီး ချစ်ချစ်ဖင်တွေကို ညှစ်နေလိုက်တယ်။ ဖင်ပေါက်လေးကို ပွတ်ပွတ်ပေးလိုက်သေးတယ်။ ချစ်ချစ်ကစောက်ဖုတ်ထဲကို လီးသွင်းပြီး အပေါ်အောက် ဖြေးဖြေးချင်းစဆောင့်တယ်။ စောစောက လီးကိုကိုင်ထားတဲ့လက်က သူ့အစိကို သူပွတ်နေသေးတာ။ ကျနော်လဲ ဖင်ပေါက်ထဲကို လက်တစ်ချောင်းသွင်းပြီး အသွင်းအထုတ် လုပ်ပေးနေလိုက်တယ်။ ချစ်ချစ်ကဆောင့်တာတွေ မြန်လာတယ်။ တစ်ချက်တစ်ချက် ဆီးခုံချင်း ကပ်ပွတ်နေတာ။ ချစ်ချစ်နို့တွေကို ကိုင်နေတဲ့ ဘော်ဒါရဲ့လက်တွေကလည်း ခါးကိုကိုင်ပြီး ဆွဲဆောင့်ချနေသလို အောက်ကနေလဲ ကော့ကော့ပြီးလိုးနေတာ။
ချစ်ချစ်ရဲ့လက်တွေက တစ်ဖက်က သူ့နို့တွေကို ညှစ်နေပြီး တစ်ဖက်ကသူ့အစိကို သူပွတ်နေတာနဲ့ ကျနော်လဲ နို့တစ်ဖက်ကို ညှစ်ပေးနေလိုက်ပြီး နောက်တစ်ဖက်က ဖင်ပေါက်ကိုနှိုက်လိုက် ဖင်တွေကို ညှစ်လိုက်လုပ်ရင်း ချစ်ချစ်ဆောင့်တဲ့အချိန်တွေမှာ ကူတွန်းပေးနေလိုက်တယ်။ “အား ကောင်းလိုက်တာကွာ ချစ်ချစ်ပြီးချင်လာပြီ။” ပြောလည်းပြော သူ့စောက်ဖုတ်ထဲကို ဘော်ဒါရဲ့လီးကြီး အဆုံးသွင်းပြီး ဆီးခုံခြင်း ကပ်ပွတ်နေတယ်။ ဖင်ထဲကိုထည့်ထားတဲ့ လက်ချောင်းကိုလည်း စအိုဝကညှစ်နေတာကိုခံစားလာရတယ်။ အဲဒီအချိန်မှာပဲ အောက်ကဘော်ဒါကလည်း အောက်ကနေကော့တင်ရင်း ပြီးပြီ ပြီးသွားပြီ လို့ပြောရင်း ချစ်ချစ်က ခါးကိုဖက်ထားတဲ့လက်တွေ ပြေကျသွားတယ်။ ချစ်ချစ်က “နေအုံးလေ ချစ်ချစ်မပြီးသေးဘူး တောင့်ထားအုံးလေ” ပြောရင်း ပြန်ဆောင့်မလို့လုပ်တဲ့ အချိန်မှာ ဘော်ဒါရဲ့လီးကပျော့ခွေပြီး စောက်ဖုတ်ထဲကနေ ကျွတ်သွားတယ်။ ချစ်ချစ်ကသူပြီးတော့မယ့်အချိန်မှာ သူ့အရင်ပြီးသွားတဲ့ဘော်ဒါကို မကျေမနပ်တွေနဲ့ ပြောရင်း ရင်ဘတ်ကိုလဲ လက်သီးနဲ့ထုနေသေးတယ်။
အဲဒီချိန်ထိ ဘော်ဒါကအောက်က ချစ်ချစ်ကဘော်ဒါရဲ့ ကိုယ်ပေါ်မှာ လေးဘက်ထောက်ရက်သား။ ချစ်ချစ်ရဲ့စောက်ဖုတ်လေးက ဘော်ဒါရဲ့လီးကြီး ခုမှ ကျွတ်သွားတာဆိုတော့ ပြဲပြီးအာနေတာ အထဲက အတွင်းသားတွေတောင် မြင်နေရတာ။ ကျနော်လဲ ဘာမှဝင်မပြောဘဲ လွှတ်ထားလိုက်တယ်။ ထုလို့ရိုက်လို့ အားရသွားတော့မှ ချစ်ချစ်က ဘေးကိုလှိမ့်ဆင်းလာတယ်။ ကျနော်လဲချစ်ချစ်ဘေးမှာ ၀င်လှဲလိုက်ပြီး ချစ်ချစ်ကို ဖက်ထားလိုက်ရင်း” ချစ်ချစ် ပြီးသွားအောင် ကိုကို ဆက်လုပ်ပေးရမလား” လို့မေးလိုက်တယ်။ “နေအုံးကွာ ကိုကို့အတွက်သီးသန့် အစီအစဉ်ရှိတယ်။ လေ ဟိုလူကြီးကို ချစ်ချစ် တင်းနေတာ သူ့ကို အပြစ်ပေးရမယ်” ကျနော်နဲ့ချစ်ချစ် စကားပြောနေတုံး ဘော်ဒါလဲ ရေချိုးခန်းထဲကို ၀င်သွားရာကနေ ပြန်ရောက်လာတယ်။
“ဘာတွေများ အပြစ်ပေးမလို့လဲချစ်ချစ်ရဲ့ ကျနော်ဘာတွေများ အမှားလုပ်မိလို့လဲ”
“ရှင့်ကိုယ်ရှင် မသိဘူးလား သူများကပြီးတော့ပါမယ် ဆိုတာကို မစောင့်ဘူးလေ တစ်ကိုယ်ကောင်း သမားကြီး”
“ဆောရီးပါ ချစ်ချစ်ရယ် ချစ်ချစ်ရဲ့အထိအတွေ့က အရမ်းကောင်းတော့ ကျနော်လဲ မထိန်းနိုင်ပဲ ဖြစ်သွားတယ်”
“ချစ်ချစ်ပေးသမျှ အပြစ်ကို ခံပါ့မယ် ကျေနပ်ပြီလား”
“ဘယ်လို အပြစ်ပေးမှာလဲ ပြောပါအုံး”
“ကဲလာ ချစ်ချစ် ဖင်ကိုယက်ပေး ဘယ်မှမကိုင်ရဘူး”
ချစ်ချစ်ကဘော်ဒါကိုပြောရင်း ကျနော့်ကိုဆွဲပြီး နှုတ်ခမ်းချင်း နမ်းနေလိုက်တယ်။ ဘော်ဒါကတော့ ချစ်ချစ်ခိုင်းတဲ့ အတိုင်း ဒူးထောင်ပေါင်ကားပေးပြီး ပက်လက်အိပ်နေတဲ့ ချစ်ချစ်အောက်ကနေ ဖင်ဝလေးကိုယက်ပေးနေတာ။ တခြားယောက်ျား တစ်ယောက်က ဖင်ကိုယက်ပေးနေတာ ခံရင်း ကျနော့်ကို နမ်းနေရလို့ထင်တယ်။ ချစ်ချစ်ရဲ့အနမ်းတွေက ပြင်းရှလွန်းနေတယ်။ လက်တစ်ဖက်က ကျနော့်ဒုတ်ကို လာကိုင်ပြီး လက်တစ်ဖက်က သူ့ပိပိကိုပွတ်လိုက် အစိလေးကိုပွတ်လိုက်လုပ်နေတာ။ ခဏနေတော့ ချစ်ချစ်က ခွာလိုက်ပြီး
“ဟိုလူကြီး အဲဒီမှာ ပက်လက်လှန်လိုက်” ဆိုပြီးဘော်ဒါကိုလှမ်းပြောတယ်။ ဘော်ဒါလဲ ပက်လက်လှန်လိုက်တော့ ချစ်ချစ်က ဘော်ဒါရဲ့ အပေါ်ကနေ ပြောင်းပြန်တက်ခွလိုက်ရင်း “ရှင်က အောက်ကနေ ပိပိကိုယက်ပေး ကိုကို ချစ်ချစ်ကိုဖင်ချပေးကွာ ဖင်ခံနေရင်းနဲ့စောက်ဖုတ် အယက်ခံချင်လို့”
“ချစ်ချစ်ကလဲ ဘော်ဒါကအောက်မှာလေ မကောင်းပါဘူး”
“ကောင်းပါတယ်ကိုကိုရ သူ့ကိုအပြစ်ပေးတာလေ ချစ်ချစ်စောက်ဖုတ်ထဲက ထွက်လာတဲ့ အရေတွေနဲ့ သူ့ကို ပွတ်ပစ်မှာ”
“ဟိုလူကြီး ရှင်လက်မခံ ချင်ရင် ရတယ်နော် ချစ်ချစ်က ရှင်နဲ့ နောက်ပေါက်ကို မြည်းဖို့ စဉ်းစားထားတာ လက်မခံဘူးဆိုရင် ပြန်လိုက်တော့ ဘယ်လိုလဲ”
“ချစ်ချစ် ဘာခိုင်းခိုင်း လုပ်ပါ့မယ်လို့ ပြောပြီးသားပဲလေ ဒါမျိုးဆိုလို့ကတော့ လာထားပဲ”
“အဲဒါဆိုယက်တော့လေ ကိုကို ဖင်ချလို့ရအောင် ဖင်ကိုဖြဲပေးထားအုံး”
ဘော်ဒါက ချစ်ချစ်စောက်ဖုတ်ကို ပင့်ယက်လိုက်ရင်း ဖင်ကိုဖြဲပေးလာတယ်။ ကျနော်လဲ ချစ်ချစ်ခါးကို ကိုင် ဖင်ဝမှာ လီးတေ့လိုက်ပြီး ဖြေးဖြေးချင်းသွင်းလိုက်တယ်။ ချစ်ချစ်ရဲ့ ဖင်မှာ စောစောက ဘော်ဒါယက်ထားတဲ့ တတွေးနဲ့ စောက်ဖုတ်က စီးကျထားတဲ့ အရေတွေနဲ့ ဆိုတော့ ဂျယ်သုတ်စရာတောင်မလိုပဲ ချောချော ရှူရှူ ပဲ ၀င်သွားတယ်။ ချစ်ချစ်ခါးလေးကို ကိုင်ပြီး ဖင်ကို ဖြေးဖြေးပဲ လိုးနေလိုက်တယ်။ ချစ်ချစ်က “ကောင်းလိုက်တာကွာ အရင်က ကိုကို ဖင်ကို လုပ်ရင် ရှေ့ကအရမ်းယားတာ ခုတော့ အောက်ကနေ ယက်ပေးနေတော့ မိုက်တယ်ကွာ ဟိုလူကြီး မြန်မြန်ယက်ပေးကွာ ပြီးတော့မယ် ကိုကိုလဲ မြန်မြန်လုပ်ပေးကွာ ပြီးချင်လာပြီ” ချစ်ချစ်က ပြောလာတာနဲ့ ကျနော်ကိုယ်ပေါ်ကနေခွပြီး ဖင်ကို သွက်သွက်လေး လိုးပေးလိုက်တယ်။
“အား အား ပြီးပြီ ကောင်းလိုက်တာ အားးးး အရေတွေထွက်ကုန်ပြီ” ချစ်ချစ်ရဲ့ ကိုယ်လုံးလေးတဆတ်ဆတ် တုန်လာပြီးတော့ ဘော်ဒါရဲ့ မျက်နှာပေါ်ကို သူ့စောက်ဖုတ်နဲ့ ဖိပွတ်နေတာ ဖင်ထဲ ထည့်ထားတဲ့ လီးတောင် ကျွတ်သွားတယ်။ ကျနော်လဲ ချစ်ချစ်ကို အသာလှဲခိုင်းလိုက်ပြီး ဖက်ထားလိုက်ရင်း သူ့ကျောလေးကိုဖွဖွလေးပွတ်ပေးနေလိုက်တယ်။ သူ့နဖူးလေးကိုလဲ နမ်းနေလိုက်ရင်း
“စောစောက ချစ်ချစ် ကိုကိုသူငယ်ချင်းကိုပြောနေတာလေ သူနဲ့နောက်ပေါက်ကို မြည်းမလို့ဆိုတာလေ အဲဒါတစ်ကယ်ပြောနေတာလား”
“အင်းပေါ့ ကိုကိုရဲ့ ဘာလဲကိုကိုက မကျေနပ်ဖူးလား”
“မဟုတ်ပါဘူး ချစ်ချစ်ရဲ့ ဟိုကောင့်ဟာက ကို့ဟာထက်ကြီးတော့ ချစ်ချစ်နာမှာစိုးလို့ပါ”
“အဲဒါကြောင့် မြည်းကြည့်ချင်တာလေ အရသာတော့ ရှိမှာသေချာတယ်။ ခိခိ”
“အော် တော်တော်အရသာရှိချင်နေတယ်ပေါ့ ဟုတ်လား အဲဒါဆို ပိုပြီး အရသာရှိသွားအောင် ရှေ့ရော နောက်ရော တပြိုင်တဲ လုပ်ချင်တယ်။ ဘယ်လိုလဲ”
“ကောင်းတာပေါ့ ချစ်ချစ်လဲအဲလိုစမ်းကြည့်ချင်နေတာ ပြောရမှာရှက်လို့ ခိခိ”
“အရင်က ကိုကိုနောက်ကိုလုပ်ရင်း ရှေ့ကို အတုနဲ့ လုပ်ပေးတာတောင် ဒီလောက်ကောင်းတာ ခုဟာကအစစ်ဆိုတော့ ဟိဟိ ပြောရင်းနဲ့ ရင်ခုန်လာပြီ ရှေ့ရော နောက်ရော ရွစိရွစိ ဖြစ်လာပြီ ခိခိ”
“ကဲ အဲဒါဆို ဘယ်လိုစမှာလဲ ကိုကိုတို့က ချစ်ချစ် ခိုင်းတဲ့ အတိုင်းလုပ်မှာ”
“အဲဒါဆို ဒီလိုလုပ်မယ်လေ ဟိုလူကြီးနဲ့ နောက်ပေါက် အရင်စမ်းကြည့်လိုက်မယ် ပြီးတော့မှ ကိုကို ပြောတဲ့အတိုင်းပေါ့”
“ဟိုလူကြီး နောက်ပေါကကို သွင်းနေတုံး ကိုကိုက ပိပိလေးကိုပွတ်ပေးနေနော်”
“အင်းပါ ချစ်ချစ်ရဲ့ ပိပိလေးကိုလဲပွတ်ပေးမယ် ချိုချိုလေးကိုလဲပွတ်ပေးမယ် ကိုကိုမိန်းမလေးကောင်းအောင် ကိုကိုအကုန်လုပ်ပေးမှာ”
“ရေချိုးခန်းထဲက ထွက်လာတဲ့ ချစ်ချစ်က ကုတင်ပေါ် လေးဖက်ထောက်တက်လာရင်း”
“ဟိုလူကြီး ချစ်ချစ်ကို နောက်ပေါက် တွယ်ချင်နေတာမလား ချစ်ချစ်ရဲ့ဖင်ကို လာယက်ပေးအုံး ရှင့်ဟာက ကိုကို့ဟာထက်ကြီးတော့ ခံနိုင်အောင် သေသေချာချာလုပ်ထားမှဖြစ်မှာ လျှာနဲ့ပါ ထိုးပေးနော်”
ဆိုပြီး ကုန်းပေးလိုက်တယ်။ ဘော်ဒါလဲ ချစ်ချစ်ခိုင်းတဲ့အတိုင်းပဲ အစိလေးကို လက်နဲ့ပွတ်ပြီး စောက်ဖုတ်နဲ့ ဖင်ကိုသေချာယက်ပေးနေတဲ့ အပြင် ဖင်ထဲကိုပါ လျှာနဲ့ထိုးထည့်နေတာ တွေ့နေရတယ်။ ပြီးတော့ စောက်ဖုတ်ထဲက ထွက်လာတဲ့ အရေတွေကို လက်နဲ့ယူပြီး ဖင်ဝမှာပွတ်ပေးလိုက် လက်နဲ့ ထိုးပေးလိုက် လုပ်နေတာ။ “အားး လုပ်တော့ကွာ ချစ်ချစ်လိုချင်နေပြီ ဖြေးဖြေးပဲသွင်းနော် ရှင့်ဟာကြီးက အကြီးကြီးပဲ ဖင်ကွဲသွားအုံးမယ်” “အင်းပါ ချစ်ချစ်ရဲ့ ဖြေးဖြေးပဲ လုပ်မှာပါ နာရင်ပြောနော်”
ချစ်ချစ်က ဖင်ဘူးတောင်းထောင်နေအောင် ကုန်းပေးလိုက်ပြီး လက်နှစ်ဖက်နဲ့ ဖင်ကိုဖြဲပေးထားတယ်။ ဘော်ဒါက ချစ်ချစ်နောက်မှာ ဒူးထောက်လိုက်ရင်း ချစ်ချစ်ဖင်ဝမှာ သူ့လီးကိုတေ့လိုက်ပြီး သွင်းလိုက်တာ ထိပ်ဖူးကြီးက အ၀မှာတင်းပြီးတော့မှ ဖင်ထဲကိုဝင်သွားတာ တွေ့နေရတယ်။ ထိပ်ဖူးကြီး ၀င်လဲသွားရော ချစ်ချစ်ဖင်ဖြဲပေးထားတဲ့ သူ့လက်ကို စောက်ဖုတ်ဆီပြောင်းပြီး သူ့ဟာသူပွတ်နေတာ။ ဘော်ဒါလဲ ဖြေးဖြေးသွင်းလိုက်ထုတ်လိုက်နဲ့ သူ့လီးတစ်ချောင်းလုံး ချစ်ချစ်ဖင်ထဲ ၀င်သွားရော ကပ်ပြီး ပွတ်ပေးနေတယ်။ ချစ်ချစ်ဆီကတော့ “ကြပ်ကြပ်ကြီးကွာ ဖင်ထဲကိုပြည့်နေတာပဲ တစ်ဆို့နေတာပဲ ရင်ဘတ်ထဲထိတောင် ရောက်တယ်။ အားးး ကျွတ်ကျွတ်” နဲ့ အသံတွေကို စုံနေတာ။ “ကောင်းလိုက်တာ ဘယ်လိုကြီးမှန်းမသိဘူး” ဆိုတာကလဲပါသေးတယ်။ ဘော်ဒါလဲ ချစ်ချစ်ခံနိုင်လာပြီထင်မှ ဆွဲထုတ်လိုက် သွင်းလိုက်နဲ့ ဖြေးဖြေးလုပ်နေတယ်။ ချစ်ချစ်က “ကောင်းလိုက်တာ ကျမ အပေါ်ကနေချင်သေးတယ်။ ရှင်ဒီအတိုင်းပက်လက်လှန်လိုက်” ပြောပြီး နေရာပြောင်းလိုက်တော့ ချစ်ချစ်က ဘော်ဒါရဲ့အပေါ်မှာ ကျောပေးရက်သားပေါ့။
ဘော်ဒါရဲ့ ရင်ဘတ်ပေါ် လက်နှစ်ဖက်ကို ပြောင်းပြန်ထောက်လိုက်ရင်း သူ့ဟာသူ စိတ်ကြိုက် လှုပ်ရှားနေတယ်။ ကျနော်လဲ သူတို့အောက်ကနေ သွားကြည့်တော့ ဘော်ဒါရဲ့ လီးကြီး ချစ်ချစ်ဖင်ထဲ ၀င်နေတာရော ချစ်ချစ်ရဲ့ညီမလေးက အရည်တွေရွှဲပြီး အောက်ကို စီးကျနေတာရော သေချာမြင်နေရတာ ကျနော်လဲ ချစ်ချစ်နားကိုတိုးသွားပြီး နှုတ်ခမ်းလေးကို နမ်းလိုက်ရင်း စောက်ဖုတ်လေးကို ပွတ်ပေးနေလိုက်တော့ “ကောင်းလိုက်တာကိုကိုရယ် အစိလေးကိုပါပွတ်ပေးပြီး အထဲကိုပါ နှိုက်ပေးအုံး” ချစ်ချစ်ခိုင်းတဲ့ အတိုင်း လုပ်ပေးလိုက်တာပေါ့။ ချစ်ချစ် ဘယ်လောက်တောင် ကောင်းနေလဲဆိုတာ နှိုက်နေတဲ့ လက်ကိုပါ စောက်ဖုတ်က ညှစ်ပေးနေတာ။ ချစ်ချစ်က “ကိုကို လုပ်တော့ကွာ ရှေ့က အရမ်းယားနေပြီ” ပြောတာနဲ့ အခွေထဲကအတိုင်း သူ့ပေါင်ကြားထဲဝင်ပြီး စောက်ဖုတ်ထဲကို သွင်းလိုက်တယ်။ စောက်ဖုတ်က ၀င်လာတဲ့လီးကို ညှစ်ပေးနေတာများ ကောင်းလိုက်တာ။ အောက်ကဘော်ဒါကလဲ ကော့ပေးနေတော့ သူ့လီး ၀င်ထွက်နေတာကိုပါ စောက်ဖုတ် ထဲကနေ သိနေရတယ်။
ချစ်ချစ်ကတော့ ကောင်းလွန်းလို့ဆိုပြီး ဘာတွေပြောနေမှန်းကို မသိတော့အောင် ရေရွတ်နေတာ။ ခဏနေတော့ ချစ်ချစ်က နေရာပြောင်းပြီး ဘော်ဒါရဲ့လီးကို စောက်ဖုတ်ထဲထည့် ကျနော်ကဖင်ကိုလိုးပေါ့။ ကျနော်က အောက်ရောက်လိုက် ဘော်ဒါကအောက်ရောက်လိုက်နဲ့ နှစ်ယောက်ပြီး လိုးနေတာ တော်တော်ကြာတယ်။ ချစ်ချစ်လဲ ဘယ်နှခါမှန်းမသိအောင် ပြီးတာတဲ့။ နောက်ဆုံးပွဲသိမ်းကို ကျနော်တို့နှစ်ယောက် တပြိုင်နက် ဆောင့်လိုးလိုက်ပြီး သိမ်းလိုက်ကြတာ။ ကျနော်က ဖင်ကိုချနေရင်း ဆိုတော့ ချစ်ချစ်ဖင်ထဲမှာ အရေတွေ ပန်းထုတ်လိုက်တာပေါ့။ အကုန်မောလို့ အိပ်တော့မယ့် အချိန်က စနေနေ့ မနက်တောင် ရောက်ခါနီးနေပြီ။